Sublimation Isakhelo sefoto | Igalari ye-ROYI yobugcisa
Sublimation Isakhelo sefoto
Ukwahlulahlula okungenanto okungenanto kwe-MDF
Umsebenzi wobugcisa we-Bespoke okanye uyilo kwisakhelo
ingqokelela egqibeleleyo yemitshato, imihla yokuzalwa, isikhumbuzo kunye nezinye izihlandlo ezikhethekileyo!
C phindaphinda ubugcisa bakho ngobuGcisa obuCwangcisiweyo
Sinikezela ngenkonzo ye-bespoke ukuyila kunye nokusika isakhelo se-MDF esenzelwe iimfuno zakho ezithile. Ubungakanani obuhleliweyo kunye nokumila kweefreyimu ze-MDF ezingenanto ziyafumaneka, ngaphandle koko, siyakwazi ukwenza i-UV okanye ubushushu obuncinci bokuhambisa imifanekiso yakho ngqo! Inkxaso ye-ROYI ART ikuxhasa ukuba wenze ubugcisa bakho bobugcisa obenzelwe wena!
Isakhelo seeleta: Oonobumba abalinganisiweyo banokuba luthando, usapho, ukukhanya kwelanga, umhlobo, ukuvuyisana njalo njalo! Unokuthatha isigqibo ngobungakanani bangaphambili, isitayile kunye nobungakanani besakhelo. Veza eyona minqweno yakho uyilo olwenziwe ngokwezifiso!
Isakhelo esinamaPhatheni entloko: Unokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi iphethini kwisakhelo, kunokuba lilanga, inyanga, intyatyambo, isilwanyana okanye nantoni na engqondweni yakho! Yila ipatheni efanelekileyo yomfanekiso ngumoya wakho!
Ipateni kwisakhelo: Ukuba uyayithanda isitayile esilula ngaphandle koyilo oluphucukileyo entlokweni yesakhelo, kutheni ungenzi iipateni ezenziwe ngokwezifiso kwisakhelo ngqo, vele usibonise ukuba ufuna isakhelo sijongeka njani kwaye siza kukunceda ukuba usijike ngokwenyani!
Isakhelo seKhathuni: Isoloko iyeyona ndlela ilungileyo yokunceda abantwana bagcine ubuntwana babo obungalibalekiyo! Ingayindlela entle yokurekhoda indlela abantwana bakho abakhula ngayo inyathelo ngenyathelo kwaye iyathandwa phakathi kwabafundi baseprayimari! Amanqaku eerekhodi zekhathuni ezithandekayo ngendlela ethandekayo! Unokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi ikhathuni oza kuhamba nayo ukuba ikhule inyathelo ngenyathelo!
Qalisa iProjekthi yakho kunye nathi
Siyila kwaye sakha isakhelo sefoto se-MDF esingenanto sisebenzisa ubuchwephesha obuphezulu be-MDF kunye ne-CNC ye-teknoloji yokusika itekhnoloji. Amaqondo obushushu abelwe ubushushu yi-180 ~ 200 ℃ kwi-60-80 Seconds ngoxinzelelo oluphakathi. Uncedo lwezakhelo zethu ze-MDF ziyamelana namanzi kwaye zenza ukuba zigcine ixesha elide ebomini.
Uqala njani kuthi? Inyathelo lokuqala kukunxibelelana nathi kwaye usixelele okusengqondweni yakho kwaye emva koko siza kuyenza ibe bubugcisa bokwenyani!
Phrinta imifanekiso yakho njengezipho ezenzelwe wena ngokunxibelelana nathi!
Ukupeyinta On Isinikezeli-Oli , Abstract Oli Ukupeyinta , neeBhari lokukhwelisa , Oli Umzobo , Akahlali Oli Ukupeyinta , Contemporary Oli Ukupeyinta , i- Zonke Products